चीन भ्रमणमा जान लागेका ओलीलाई भट्टराईको १० बुँदे सुझाव (१० बुँदासहित)
काठमाडौं, ३ असार । चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले १० बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
सुझावपत्रमा डा. भट्टराईले विभिन्न विषयलाई महत्वका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भट्टराईले यो भ्रमणलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न दुई मुलुकबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप ग्रहण गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा अझ परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
यस्तो छ भट्टराईले पेश गरेको सुझावपत्र-